Heather Theurer dia mampiseho ny kantony ao amin'ny Ohana Means Family | Famoronana an-tserasera
'Ohana Means Family' ao anaty menaka avy amin'ilay mpanakanto mahay Heather Theurer
Miaraka amin'i Heather Theurer dia miatrika mpanao hosodoko iray izay tsy nandalo ny fandalinana nentim-paharazana indrindra momba ny Fine Arts isika fa kosa ny zava-kanto rehetra dia avy amin'i mahaiza mianatra ary noho ny fitiavana lazainy fa manao hosodoko araka ny hitantsika amin'ity asa ity izay noresahinay tamin'ny 'Ohana Means Family'.
Amin'ity asa sary ity dia manana a zazavavy kely taona vitsy miaraka amin'ny biby fiompy mahafatifaty izay fantatsika rehetra amin'ny maha Stitch azy amin'ny endriny marina indrindra toy ny hoe nanana fiainany manokana izy. Sombin-tsolika izay misy pitsopitsony tena tsara entina manazava sy hitondra azy ireo amin'ireto tsipika ireto rehefa nahalala izany omaly 'Equilibrium', na dia teknika mifangaro amin'ny menaka sy akrilika aza.
Nilaza ny heviny avy amin'ny tranokalany manokana ny momba ny antony nipoiran'ny filan'ny sary hosodoko ny fandalinana ny fandinihana olona, tontolo iainana, biby ary lamba. Tsy afaka nahazo fanabeazana nentim-paharazana tamin'ny zavakanto izy, fa nosoloiny ny fahaizany manokana sy ny fandalinana ilay antsoinay hoe mampianarin-tena. Eto aho dia milaza fa, raha nandalina samirery nandritra ny taona maro ny hai-kanto dia tsara kokoa indraindray ny manaraka an'io làlana io fa tsy mila voataona amin'izay mety hibaikoin'ny mpampianatra.
Ohana Means Family dia manolotra freshness, fiainana andavanandro, halemem-panahy ary amin'ny ankapobeny dia manome fahatsapana tena tsara izay ahitan'ny toetra Stitch ny sisiny ilaina mba te-hametraka azy io amin'ny toerana ao an-tranontsika. Asa iray mampiseho ny fahazazako sy ireo taona feno herisetra, hery ary hafanam-po amin'ny fahalalana.
Manana ny tranonkalan'ilay mpanakanto ianao avy eto ary ny azy Pejy Facebook hanaraka tsirairay ny asanao avo lenta ary vita araka ny ahitan'ny tenanareo azy. Mpanakanto nianatra irery hanaraka tsy misy isalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Ohana Means Family' ao anaty menaka avy amin'ilay mpanakanto mahay Heather Theurer
Mianara maka sary ao anatin'ny 31 andro: Mazava ho azy fa Mazava ho azy
'Equilibrium' amin'ny menaka sy akrilika nataon'i Raipun